Ezigbo Housinglọ - Prairie State Legal Services
Anyị Fair Housing Project na-enyocha ma na-ama ikpe nke ịkpa ókè site ụlọ na enye. Ihe oru ngo a na - enyere ndi ahia aka idozi esemokwu obibi di nma ma duzie mmuta iwu obodo banyere ikike na ulo kwesiri ekwesi.
Iji kpọtụrụ Fair Housing Project:
Pịa ebe a iji fbiko kpọtụrụ anyị na social media!
EGO & ỌRUT
Ele anyị Fair Housing Project broshuọ na English
Ele anyị Fair Housing Project broshuọ na Spanish
PSLS Mmekọahụ Mmekọahụ
Ntụle ego_Pre-chazụta (Spanish)
Litezụ akwụkwọ ọgụgụ_Post
Litezụta ọgụgụ akwụkwọ_Post (Spanish)
Usoro nchịkwa ego na ego (Spanish)
Ọrụ Iwu Iwu Prairie na-arụ ọrụ iji mee ka a mata banyere iwu ụlọ obibi ziri ezi nke na-echekwa ndị mmadụ n'otu n'otu megide ịkpa ókè ụlọ.
Anyị na-emepe ma na-ekesa ihe omumu nke na-akọwa ụzọ iji gbochie ikpe na-ezighị ezi banyere ụlọ na iwu metụtara na-egbochi ịkpa oke. Ngwa anyị dị na Bekee na Spanish.
Anyị na-ewetara Ulo oru ulo oru ulo maka ndị nwe ụlọ, ndị nwe ụlọ, ndị ọrụ na-anaghị akwụ ụgwọ na ndị ọrụ gọọmentị. Anyị nwere ike ịmepụta ọzụzụ na-elekwasị anya na isiokwu dị iche iche n'ime iwu ụlọ obibi ziri ezi.
Ọ bụrụ na gị ma ọ bụ nzukọ gị chọrọ ịmụtakwu ihe, biko kpọtụrụ Fair Housing Project taa na [email protected].
Gịnị Bụ Ezigbo Housinglọ?
Ezigbo ụlọ bụ ikike mmadụ ịhọrọ ụlọ nke enweghị ịkpa oke. N'ahịa ụlọ, “ịkpa oke” pụtara omume na -amachibido nhọrọ ụlọ n'ihi otu ụdị onye. Naanị agwa ụfọdụ ka echekwara n'okpuru iwu. N'okpuru iwu gọọmenti etiti, àgwà ndị ahụ bụ agbụrụ, ụcha, okpukperechi, okike, agbụrụ mba, ọnọdụ ezinụlọ (ezinụlọ nwere ụmụaka), na nkwarụ. Na Illinois, iwu na -echebe otu agwa dị ka iwu gọọmentị etiti gbakwunyere usoro ọmụmụ, afọ, ndị agha ma ọ bụ ọkwa ịpụ, ọnọdụ alụmdi na nwunye, ọnọdụ nchekwa, ọnọdụ ịtụrụ ime, ndekọ njide na inwe mmekọahụ.
Maka ama ndi ozo banyere ulo di nma, gaa na:
Office of Fair Housing and Equal Opportunity at the US Department of Housing na Urban Development (HUD)
Ngalaba Na-ahụ Maka Ezigbo Housinglọ na Ngalaba Na-ahụ Maka Ihe Ndị Ruuru Mmadụ na Illinois
Whonye Ga-enwerịrị Ezigbo Fairlọ?
Ewezuga ndị ọzọ, ndị niile na-enye ụlọ ga-enyerịrị ụlọ kwesịrị ekwesị site n'iwu. Providerslọ enye gụnyere:
Ndị nwe ụlọ / ndị nwe ụlọ
Companieslọ ọrụ njikwa
Ndị na-azụ ahịa ụlọ
Ndi na ere ahia ulo
Ndị na-ere ahịa ụlọ na ụlọ ọrụ
Lọ akụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ịgbazinye ego ndị ọzọ
Ụlọ ọrụ gọọmentị
Kedu ka Doeskpa oke Housinglọ Na-akwadoghị Iwu Dị?
Discriminationkpa oke ụlọ n'ụzọ iwu na-akwadoghị nwere ike ịdị n'ụdị dị iche iche. Fọdụ ụdị dị iche iche gụnyere:
Nkwupụta na-egosi na ụlọ dịnụ adịghị
Usaljụ ịgbazite ma ọ bụ ree ma ọ bụ kparịta maka ụlọ
Usaljụ ịme ụlọ dị mma ma ọ bụ kwe ka mgbanwe dị mma maka ndị nwere nkwarụ
Usaljụ ịme ma ọ bụ nye ozi gbasara mgbazinye ego mgbarakwa ụlọ
Usoro na ọnọdụ na-akpa oke
Mgbasa ozi na-akpa oke
Iyi egwu, mmaja, mmanye ma ọ bụ imegwara
Ịnye nsogbu mmekọ nwoke na nwanyị
Ọrụ ụlọ dị iche na nke ndị ọzọ nwere
Kedu ka anyị ga - esi nye aka?
Ọ bụrụ na ị bụ onye a na-emekpa oke nke ụlọ, Prairie State Legal Services nwere ike:
Kpakorita na nnọchite gị na onye nwe ulo ma ọ bụ ndị ọzọ na-eweta ụlọ.
Nyochaa ihe ị chere nwere ike ịbụ ịkpa oke ụlọ site n'iji ụlọ obibi ziri ezi.
Nyere gị aka ime mkpesa na Ngalaba Na-ahụ Maka Housinglọ na Urban nke US ma ọ bụ Ngalaba Na-ahụ Maka Ihe Ndị Ruuru Mmadụ na Illinois ma ọ bụ n'ụlọ ikpe.
Na-anọchite anya gị n'ụlọ ikpe ma ọ bụrụ na ị de akwụkwọ mkpesa.
Whonye Na-arụ Ọrụ Ahụ Maka Housinglọ Ahụ?
Ọrụ a na -enweta ego pụrụ iche iji jeere ndị nọ n'Ọdọ Mmiri, McHenry, Boone, Winnebago, Peoria na Tazewell Counties; Obodo Bloomington na Obodo Nkịtị.
Ndị a bụ ụfọdụ ihe atụ nke ihe ịkpa oke ụlọ megidere iwu na-ada ka:
“Ọ bụ naanị ndị na-asụ Bekee ka anyị na-agbazite.”
“Ee e, anyị enweghị ike ikwe ka unu wuuru mgbidi maka oche nkwagharị gị.”
“Ọ masịrị m ịgbazite ụmụ nwanyị.”
"Anyị anaghị ekwe ka ụmụ anụmanụ na-akwado, belụsọ na ọ bụ nkịta nwere anya na-ahụ ụzọ."
Anyị anaghị enye ego mgbazinye ego na mpaghara ahụ.
"The ulo esesịn gbaziri (na ọzọ nchoputa na-ekpughe na ọ bụghị n'ezie na gbaziri)."
Apụghị m ịgbazitere gị ụlọ elu n'ihi na ụmụ gị na-eme mkpọtụ nke ukwuu maka ndị ọzọ na-ebi n'ụlọ. ”
“Enweghị m ike ịgbazite gị maka na ị nwere iwu nchedo achọghịkwa m nsogbu ọ bụla ebe a.”
"Nche nkwụnye ego bụ ọnwa 2 nke mgbazinye." (na nyocha ọzọ na-ekpughe na ndị ọzọ na-akwụ obere ego)
“Ọ bụ naanị ndị di na nwunye ka anyị na-enye ego ndị ahụ.”
“Nke a bụ ọkwa nchụpụ gị.” (mgbe i mechara mkpesa banyere iyi egwu mmekọahụ site n'aka onye ọrụ na-eweta ụlọ)
BECR A B V ỌZỌ VOLUNTEER
Offọdụ ndị ọrụ afọ ofufo anyị bụ “ndị nnwale.” Anyị na-azụ ndị nnwale ka ha gawa ebe ọrụ ha kpọrọ “ule”. N'oge ule ndị a, ndị ọrụ afọ ofufo anyị na-arụ ọrụ nke onye na-achọ ụlọ, ụlọ, ma ọ bụ mgbazinye ụlọ. Ndị nnwale nwere ike isonye na ngosi ụlọ, ụlọ emeghe, ma ọ bụ ahụmịhe ndị ọzọ iji nyere anyị aka ileba anya na ụlọ obibi ziri ezi. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike iji etu otu ụlọ ọrụ na-esi emeso ndị nwere agwa dị iche iche aka. Ihe Nlereanya: Anyị nwere ike iji etu onye na-eweta ọrụ si emeso onye na-agba ọcha wee jiri ya tụnyere onye Africa-America ma ọ bụ onye Hispanic na-anwale. Ma ọ bụ, anyị nwere ike iji etu onye ọrụ si emeso onye nwere nkwarụ ma e jiri ya tụnyere onye nyocha na enweghị nkwarụ. Anyị nwere ike iji etu onye nyere ihe si emeso nne ma ọ bụ nna ya na ụmụaka tụnyere otu onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye. Ule bụ ndị dị oké mkpa dị mkpa nke onwe mmemme nke Fair Housing Project. Enweghị ọtụtụ ọdọ mmiri nke ndị ọrụ afọ ofufo na-anwale, ọ ga-esiri nnọọ ike ịchọpụta azịza nke ịkpa ókè na-akwadoghị.
Gịnị kpatara ule?
Lọ ikpe na-akwado usoro nnwale a oge niile dịka usoro ziri ezi na nke dị mkpa iji chọpụta omume nke ịkpa oke ụlọ na-akwadoghị. Mgbe ụfọdụ ule bụ naanị ụzọ otu òtù nwere ike isi gosipụta ịkpa oke aghụghọ.
Kedu ka m ga-esi bụrụ onye nyocha?
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị iburu ọrụ ịma aka na nke na-akwụghachi ụgwọ nke onye nyocha, ị ga-emerịrị ngwa. Ozugbo anabatara ma nyochaa ngwa ahụ, ị ​​ga-edebanye aha maka otu n'ime usoro ọzụzụ ọzụzụ anyị zuru oke.
Di iche iche: Anyị chọrọ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị agbụrụ niile, agbụrụ agbụrụ na afọ.
pụrụ ịdabere: Ozugbo ị nyefere ọrụ, anyị ga-achọ ime ihe ngwa ngwa ma soro. Anyị na usoro ihe omume gị na-arụ ọrụ.
Ebumnuche: Anyị chọrọ ndị ọrụ afọ ofufo ndị nwere ike ịhụ ma cheta ihe omume. Ndị nnwale anaghị anwa 'ịchọpụta' ịkpa oke kama naanị ịkọ akụkọ ziri ezi ihe mere n'oge ule ahụ.
Nkwenye: Ndị na-agba ịnyịnya nwere ike ịchọ ịgba akaebe dị ka ihe akaebe n'otu ule. N'ihi nke a, ndị nnwale agaghị enwerịrị nkwenkwe nnukwu mpụ ma ọ bụ nkwenye nke mpụ metụtara aghụghọ ma ọ bụ iyi ụgha.
Ọzụzụ: Anyị na-enye ndị ọrụ afọ ofufo ọzụzụ niile na ule omume tupu ha enweta ọrụ. Anyị na-enye obere ego maka ndị ọrụ afọ ofufo ahụ nke mechara nke ọma usoro ọzụzụ ahụ.
Nka na ụzụ: Anyị na-ahọrọ ndị ọrụ afọ ofufo nwere ike iji Microsoft Word dee akwụkwọ ha. Anyị nwere obi ụtọ ịme ndị ọzọ maka nkwarụ.
Ụgbọ njem: Anyị na-ahọrọ ndị ọrụ afọ ofufo nwere ike ịnye ma ọ bụ hazie maka njem ha. Anyị na-akwụghachi ndị na-akwụ ụgwọ ụgwọ maka njem ha ma ọ bụ ụgwọ njem ha.
Nchọpụta: Ndị nyocha niile ga-enwerịrị njirimara obodo.
Ikike ọrụ: Ekwesịrị inye ndị niile kwere ka ha rụọ ọrụ na United States.
Ịkwụ ụgwọ: Anyị na-akwụghachi ndị ule ahụ ọrụ site na obere ego.
Biko rịba ama na ule abụghị ọrụ nwa oge ma ọ bụghị ọrụ na-adịgide adịgide. Anyị na-ekenye ndị nnwale mgbe anyị chọrọ ha yana ka ha dị. Ọzọkwa, ndị ọrụ ụlọ na ndị mmadụ n'otu n'otu na ịgbazite ma ọ bụ ire ere nke ụlọ obibi erughị eru ije ozi dị ka ndị nnwale.